Raspberry Pi 4: orinasa Espaniola miasa mba hitondra Vulkan | Avy amin'ny Linux
Raspberry Pi 4: orinasa espaniola miasa mba hitondra an'i Vulkan
Isaac | | Featured, Games
Izay manana Raspberry Pi 4 SBC dia ao anaty vintana, satria orinasa Espaniola antsoina hoe Igalia no miasa mafy hitondra ny Vulkan sary API koa ho an'ity fitaovana ity. Ny API mahery dia afaka nanolo ny OpenGL tsy ho ela, manome alalana sary vaovao amin'ity tabilao kely ity. Aza adino fa amin'izao fotoana izao, ny Raspberry Pi 4 dia manohana ny OpenGL ES API (tantanan'ny The Khronos Group ihany koa).
Saingy miaraka amin'i Vulkan ianao dia afaka miasa amin'ny hery bebe kokoa sy rafitra maoderina kokoa ho an'ity sehatra informatika Britanika ity. Ary fisaorana rehetra amin'ny fampandrosoana an'io Orinasa Espaniola, izay mamorona mpamily ilaina amin'ny rafitra fiasa Raspi hiara-miasa amin'ireo singa sary amin'ny lalao video sy fampiharana amin'ny alàlan'ity API ity.
Amin'izao fotoana izao, izay rehetra manana Raspberry Pi 4 miaraka amin'ny Broadcom BCM2711 SoC dia tokony hianina amin'ny fiaraha-miasa amin'ny OpenGL ES 3.1 API misy sary izay noresahiko etsy ambony. Igalia dia nanamboatra an'io fanohanana io taorian'ny volana maro nivoarana hatramin'ny 3.0 ka hatramin'ny 3.1 (ankoatry ny fanitsiana ny hadisoana sasany ary nanisy fanatsarana sasany toy ny fampiasana ny shaders computational).
Ary izao dia nanolo-kevitra ny hanohy handroso mankany Vulkan izy ireo. Vantany vao vita amin'ny OpenGL ES izy ireo, dia mifantoka amin'ilay API loharano misokatra hafa rehetra ny asany. Ny valiny rehefa misy dia ho afaka hihazakazaka rindrambaiko sary mitaky be lavitra kokoa noho ilay azonao ihazakazahana amin'ity solaitrabe ity dieny izao, miaraka amin'ny effets mandroso kokoa sy mahomby kokoa.
Amin'izao fotoana izao, aorian'ny herinandro niasana tao Vulkan, efa afaka nanao izy ireo fampisehoana sasany, toy ny mihazakazaka ohatra voalohany amin'ny telozoro amin'ny RGB (karazana «Hello World»Ao amin'ny tontolon'ny sary).
Raha te hahalala antsipiriany misimisy momba an'i Igalia ary ny fivoarany, azonao atao ny mitsidika azy tranokala ofisialyl
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Featured » Raspberry Pi 4: orinasa espaniola miasa mba hitondra an'i Vulkan
MATE: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19?
Kanelina: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19?